‘कारवाही नै समाधान होइन, संयम भएर यात्रा गरौं’ | दर्पण दैनिक
‘कारवाही नै समाधान होइन, संयम भएर यात्रा गरौं’
प्रकाशित मिति: २०७७ पुष ७ गते ०५:११
महानगरीय प्रहरी प्रभाग कलंकीमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी निरिक्षक पुरुषोत्तम कार्कीसंग मनिष रन्जन बरालले गरेको कुराकानीः
यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी भैइरहेको छ ?
अहिलेको अवस्थामा कलंकीचोक, खसीबजार, मकालु, हुँदै नैकाप सम्म सम्पुर्ण ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने हेर्ने जिम्मा मेरो हुन्छ । यो उपत्यका भित्रिने मुख्यचोक हो । यो चोकलाई हेर्दा काठ्माडौंमा रहेका धेरै चोकहरु मध्येकै फरक चोक हो । किन फरक चोक हो भनें यहाँ ठुला–ठुला १८ चक्के २२ चक्के गाडिदेखि लिएर ठुला ठूला क्रेनदेखि लिएर साना साना मोटरसाईकल साईकल हिड्ने गर्दछन । त्यस्तै भीडभाड हुने चोक पनि हो ।
यसलाई व्यवस्थापन गर्नकोलागि हामीले सकेसम्म बढिभन्दा बढी जनशक्ती परिचालन गरेर विभिन्न ६ ओटा चोकहरुमा ट्राफिक राखेर काम गरिरहेका छौं । पैदलयात्रुलाई पनि सुरक्षित तरिकाले बाटो काटन तथा यात्रा गर्न अनुरोध गर्दै पैदलयात्रुहरुलाई प्राथमिकता राखेर ट्राफिक आफैं बसेर बाटो कटाउने काम पनि गरेका छौं ।
हामीले ट्राफिक आवागमनमा बाधाहुने किसिमका फुटपाथका सामानहरु, जथाभावी पार्किङ्गहरु , जताततै पिक तथा ड्रभ गर्ने किसिमका सवारीहरुलाई सर्वप्रथम हटाउछौं । अनिमात्र हामीले ६ ओटा चोकहरुमा ट्राफिक राखेर काम गर्दा खेरी अलिकती सहज र छिटो हुन्छ ।
त्यस्तै जामहुने मुख्य कारण केहो त ? भनेर त्यस्लाई मध्यनजर गर्दै ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाउछौँ र अहिले सम्म ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी सफल भएका छौं । कतैबाट पनि कुनै त्यस्ता प्रकारका आलोचनाहरु सिर्जना भएका छैनन् र यहाँका स्थानिय, बुद्धिजीवी, व्यावसायीहरु र पैदलयात्रुहरु पनि हामीले गरेको कार्यप्रति खुसि हुनुहुन्छ ।
यो क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा के कस्ता चुनौति रहेका छन ?
चुनौतिहरु पनि छन्, तपाईले देखिरख्नु भएको छ । एकतिर हामीले पैदलयात्रुहरु लाई ब्लक गरेर गाडी खुलाउछौं यता पैदलयात्रुहरु झन्झट मान्छन् उनीहरुले १ मिनेट देखि २, ३ मिनेट पर्खनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले झन्झट मान्नु पर्ने अवस्था छ । त्यस्तै ठुला ठूला मालवाहक ट्रकहरु चलिरहेको अवस्थामा पछाडि आईरहेका साना साना मोटरसाईकल लगायत अन्य साधनहरुले छोईदिन सक्ने अवस्थाहरु पनि छन् ।
दुर्घटना बढिहुने अवस्था पनि छ । अर्को कुरा यहाँ (फ्लाई ओभर) छैन त्यस्तै आकाशे पुल नभएका कारणले त्यस्ता चुनौतिहरु बढि छन । ट्राफिक लाईट नभएका कारणले धेरैजसो जनशक्ति प्रयोग गर्नुपरेको छ ।
यस्तो अस्तव्यस्त बाटोमा ट्राफिक व्यवस्थान राम्रो बनाउन तथा दुर्घटना कम गर्न चालकहरु तथा पैदल यात्रुलाई के भन्नु हुन्छ ?
मैले बिशेषगरि ध्यान दिनु पर्नेमा पैदल यात्रुहरुलाई र सवारी चालकहरु लाई पनि के भन्न चाहन्छु भने । कृपया एकले अर्कालाई केही समय पर्खने बानी बसालौं यहाँ हाम्रो नजरमा कसैले कसैलाई पर्खेको देखिंदैन, उ पहिला अगाडि जाने कि म अगाडि जाने भन्ने जुन प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसले गर्दा दुर्घटना बढि हुने गर्दछ, त्यसकारण संयमता अपनाउन सवैलार्य अनुरोध गर्दछु । पैदल यात्रुहरुलाई फेरी पनि के भन्छु भने बाटो काट्नु पर्दा समुहमा बाटो काट्ने गरौं ( जेब्राक्रसिङ्गबाट होस वा जेब्रा क्रसिङ्ग नभएका ठाउँहरुबाट बाटो काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा समुहमा बाटो काटौं, एक्लै बाटो नकाटौं समुहमा बाटो काट्नाले टाढाबाट आउदैगरेका साधनहरु टाढै रोक्ने गर्छ र यस्ले बाटो काट्नमा अझै मदत पुर्याउछ ।
यता सवारी चालकहरुले पनि केही समय निकालेर भए पनि पैदलयात्रुहरु लाई पनि प्राथमिकता दिने बानी बसालौं । त्यस्तै विशेष गरेर मोटरसाईकल चालकहरुलाई पनि अनुरोध गर्दछु , किनकी ठुला साधनहरु प्राय रोक्ने गर्दछन् भने साना साधनहरुले यात्रु छलेर हिड्ने गर्दछन् त्यसकारण पैदलयात्रुहरुलाई प्राथमिकता दिँउ र सडकमा खेलाची नगरौं । यहाँ हरेको चालकहरुले कुनै पनि अवस्थामा प्रतिस्पर्धाको भावना राखेर नहिडौं भनेर उहाहरुलाई अग्रह गर्दछु।
विशेष गरि पैदल यात्रुहरु र सवारी चालकहरुलाई ट्रफिक नियमहरु प्राय सबैलाई नै थाह छ कहाँ बाटो काट्ने कहाँ नकाट्ने कुन (वे) बाट आफू आउने या न आउने र मलाई लाग्छ ट्राफिक इसाराहरु सबैले बुझ्नुहुन्छ, बुझ्दा बुझ्दैपनि त्यसको उल्लंघन नगरौं । कारवाही नै समाधान हैन र सबै गल्तिहरुलाई कारवाहिले मात्रै सबैकुराको समाधान गर्न सक्दैन । चालक भएपछि आफ्नो नैतिक धर्मलाई पनि नबिर्सौं, बाटोमा हिड्दाखेरी आफू जिम्मेवार भएर हिडौं त्यसो गरेमा मलाई लाग्छ दुर्घटना पनि कम हुन्छ र सबैलाई सहज हुन्छ ।